Tahiry vehivavy vehivavy Afrikanina - fototra afrikhepri
Fifandraisana SOKAJY AFRICAN WOMEN
Yaa Asantewa, renin'ny renin'ny fanjakana Asante
Yaa Asantewa, teraka tamin'ny taona 1840 ary maty tamin'ny 17 Oktobra 1921, dia nahazo ny anaram-boninahitry ny renin'ny mpanjaka ejisu an'i Nana Akwasi Afrane Okpese, ilay Ejisuhene, ...
Aminatou de Zaria, mpanjakavavin'i Haoussa mpiady
Aminatou, izay ho lasa haza faha-24 an'i Zazzaou (anarana nomena ny mpitondra ny firenena) dia vao 16 taona monja fony ny rainy, Magajiya Bakwa Turunku, ...
Amin'ireo sivilizasiôna fahagola rehetra, ny sivilizasiôna Egyptianina-Nubiana dia nampiavaka ny tenany tamin'ny fanomezana vehivavy tombontsoa maro samihafa izay matetika tsy misy amin'ny fiarahamonina vokatry ny famindran-toerana sy ny patriarika (Gresy, ...
Ory Okolloh, 37 taona, lehiben'ny Google Africa hatramin'ny 2010, dia miasa hampivelatra ny fahafaha-manao Afrikana amin'ny Internet any Johannesburg. Nahazo diplaoma tamin'ny lalàna tany Harvard, mpisolovava sady bilaogera taloha, ...
Ny tantaran'ilay vehivavy mainty sy ny volony volo
Fizarana 1: 1400-1900, Ny Loza Fandevozana Asehon'ireo manaraka ny vehivavy mainty hoditra eto Etazonia. Miorina amin'ny boky (Hair Story) 2001 nataon'i D. Ayana Bryrd ...
Matriarchy tany Afrika
Ny patriarka dia nialoha ny patriarika ao amin'ny fiaraha-monina nanangona sy nihaza, avy eo tamin'ny niompiana niaraka tamin'ny andriamanibavin-dreny. Tsy hiorina amin'ny ...
Nizeriana iray manomboka saribakoly mainty izay manala baraka barbie
Tsy nahita saribakoly mainty ho an'ny zanany vavy izy, ka namorona azy. Fito taona aty aoriana, ny andalana ankafizin'ny saribakoly roa noforonin'ilay rainy Nizeriana ...
Tonga (Tonga) - Michelle Obama (Lahatsary)
Mitantara ny tantaram-piainany i Michelle Obama. Hatramin'ny fahazazany, nandritra ny taona maro izay tsy maintsy nampifanarahany ny fiainany amin'ny maha-mpisolovava sy reny azy.
Yaa Asantewa, teraka tamin'ny 1840 ary maty ny 17 Oktobra 1921, dia nahazo ny anaram-boninahitra "Renin'ny Renin'i Ejisu" avy amin'ny rahalahiny Nana Akwasi Afrane Okpese, ny "Ejisuhene", ...
Iza moa i Kenyan Wangari Muta Maathai?
Wangari Muta Maathai, vehivavy Afrikanina voalohany nahazo ny loka Nobel, dia maty tamin'ny faha-71 taonany noho ny homamiadana tao amin'ny hopitaly Nairobi. Nikomy, nanambana, ...
Ireo solom-borona mainty mena - Dr Khadi Sy Bizet
Ny foto-kevitra iraisam-pirenena momba ny hatsaran-tarehy vehivavy dia multethnic ankehitriny. Tsy afaka manisa ny maodely ambony intsony avy any Afrika, Afovoany Atsinanana na Azia isika, eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena hatsaran-tarehy….
Harriet Tubman, mafana fo amin'ny zon'ireo Afrikana Afrikana sy ny vehivavy
I Harriet Tubman no tena malaza momba ny mpitantana ny Railway ambanin'ny tany. Nandritra ny folo taona dia nanao dia 19 izy tany atsimo ary nitarika bebe kokoa ...
Ama Mazama, manam-pahaizana momba ny fiteny, fivavahana afrikana ary mpahay tantara
Ama Mazama dia Afro-Guadeloupean. Taorian'ny fanadihadiana mamirapiratra any Frantsa dia nanapa-kevitra ny hipetraka any Etazonia izy, firenena izay ampianariny ao amin'ny departemanta afrikana momba ny University University any Philadelphia….